५० शय्याको अस्पतालमा २ चिकित्सक - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 National ५० शय्याको अस्पतालमा २ चिकित्सक
५० शय्याको अस्पतालमा २ चिकित्सक
बर्दिया, २ साउन । बर्दिया अस्पतालका डा. विन्दु पाण्डे र कृष्ण खनाललाई भ्याइ नभ्याइ छ । दैनिक १ सय ५० बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण उनीहरूकै जिम्मामा छ । ५० शय्याको अस्पतालमा इमरजेन्सीमा मात्रै २० देखि २५ जना बिरामी आउँछन् । दुई जना डक्टरले कता मात्रै हेर्नु, पाण्डे भन्छिन् । त्यसो त अस्पतालमा दरबन्दी नभएर चिकित्सक अभाव भएको भने होइन । अस्पतालमा १४ जना चिकित्सको दरबन्दी छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सुभाष पाण्डे चीन गएका छन् । सरुवा भई बर्दिया अस्पतालमा आएका डा. पिथेन्द्र खड्का नेपालगन्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा ६ महिनादेखि काजमा छन् । उनी अस्पताल आएको एक महिना नबित्दै काजमा खटिएका थिए । अधिकांश चिकित्सक तालिमका लागि अन्यत्र गएपछि दुई डाक्टरले दैनिक डेढ सयभन्दा बढी बिरामीलाई सेवा दिनु परेको हो ।
प्रसूतिदेखि ठूला र साना शल्यक्रिया र इमरजेन्सी सेवासमेत उनीहरूले नै हेर्नुपर्छ । विशेषज्ञ डा. पाण्डेले गर्मी मौसमका कारण भाइरल ज्वरोलगायतका बिरामी बढ्दै गएको बताइन् । उनका अनुसार बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि आफूहरूले सामान्य आरामसमेत गर्न नभ्याएको बताइन् । बिरामको चाप बढ्दा धेरै कुर्नु परेको बिरामीको गुनासो छ । दरबन्दी अभावमा चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने फार्मेसी सञ्चालन हुन सकेको छैन । अस्पतालमा खटाइएका चिकित्सकले जिल्लामा बस्न नमान्दा समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
अस्पतालमा सर्पदंशका बिरामीसमेत बढ्दै गएका छन् । अस्पतालमा पाठेघर, हर्निया, हाइड्रोसिललगायतका जटिल शल्यक्रिया हुने गरेको छ । दरबन्दीअनुसार नभए पनि थोरै डाक्टरले बिरामीलाई सन्तोषजनक उपचार दिइरहेको डा. पाण्डेले बताइन् । ‘चिकित्सकको कम जनशक्ति भए पनि हामीले सकेसम्म बिरामीको उपचार गरिरहेका छौं,’ डा. पाण्डेले भनिन, ‘दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति भए बिरामीको उपचार सेवा सहज हुन्थ्यो ।’